Paradaịs Cruise Line Grand Classica Grand Bahamas Island laghachiri ọkwa nke ọma
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Bahamas Breaking » Paradaịs Cruise Line Grand Classica Grand Bahamas Island laghachiri ọkwa nke ọma
Mgbe ọnwa iri na isii gachara, Bahamas Paradise Cruise Line banyere ndị njem mbụ ya na Palm Beach, Florida na nso nso a, na ụbọchị ncheta ọnwa mbụ nke ọrụ na-abịaru nso, a na-akpọsa ọrụ ahụ dị ka ihe ịga nke ọma.
Onyinye ezumike pụrụ iche na ebe ntụrụndụ kacha elu nke agwaetiti ahụ na -akwalite ndị mbịarambịa.
Ụgbọ mmiri flagship nke ezinụlọ nwere ma na-arụ ọrụ, Nnukwu Classica, jiri ụgbọ mmiri si n'ọdụ ụgbọ mmiri Palm Beach na Julaị 24.
Ọ rutere agwaetiti Grand Bahama na Julaị 25 na-akara akara nloghachi nke njem ụgbọ mmiri ama ama "micro-cation" abalị abụọ.
Ian Rolle, Onye isi oche, Grand Bahama Island Tourism Board na -ekwupụta ụfọdụ ihe ịga nke ọma na ngwaahịa ndị mmekọ anyị, Viva Wyndham Fortuna Beach na Grand Lucayan na -enye. "Ugbu a usoro ụgbọ mmiri amaliteghachila ọrụ, ndị njem na-enwekwu obi ike na obi ụtọ maka ohere ịlaghachi na Bahamas na Viva Wyndham Fortuna Beach na Grand Lucayan na-ebuga 'micro-cation' n'ezie." Ọ gbakwụnyere, "Protocols dị ebe ahụ iji hụ na ọ dị mma maka ndị njem".
Marco Gobbi, Viva Wyndham Fortuna Beach Resort, Meshell Britton, Kọmitii Njem Nleta Grand Bahama, Chrisanne Aston, Isi nke Bahamas
Francis Riley, onye isi azụmaahịa azụmaahịa nke ụgbọ mmiri kwenyere; “Ndị ọrụ ụgbọ mmiri niile nwere ọgwụ mgbochi ọrịa 100% mana anyị na -anabata ndị ọbịa ọgwụ mgbochi na ndị ọrịa. Nke ahụ kwuru, anyị na -agbaso usoro iwu siri ike gbasara nnwale tupu ebubata ya na ịgbaso ndụmọdụ CDC iji hụ na ahụmịhe dị n'ụgbọ dị mma. N'akụkụ a, a ga -eyi mkpuchi ihu n'ime ime ụgbọ niile, belụsọ mgbe onye ọbịa na -eri nri ma ọ bụ na -a drinkingụ mmanya. Achọghị ihe mkpuchi ihu na mpaghara mpụga dịka oche ọdọ mmiri, iri nri n'èzí, ụlọ mmanya, wdg, ”ka o kwuru.
Iji hụ na ahụike na nchekwa nke ndị njem na ndị ọrụ ụgbọ mmiri niile, Bahamas Paradise Cruise Line etinyerela ụkpụrụ ịdị ọcha sara mbara, yana na -agbaso ụkpụrụ niile edepụtara na chọrọ site na CDC's Framework for Conditional Sailing Order. Dị ka onye isi ụlọ ọrụ Oneil Khosa si kwuo, "ndị ọbịa nọ n'ụgbọ ahụ nwere ike ịnụ ụtọ ezumike Bahamas dị ọcha, dị nchebe, na-atọ ụtọ, yana usoro ụgbọ mmiri zuru oke nke njem njem abalị abụọ na-aga azụ."
N'oge ezumike nká, Ngalaba Ọzụzụ Ndị Mmepe nke Bahamas nyere ọzụzụ ọzụzụ pụrụ iche, ndị ọrụ ụlọ nkwari akụ Frontline, ndị ọkwọ ụgbọ ala Taxi, yana ndị ọzọ metụtara ụlọ ọrụ njem, na -ahụ na nrube isi siri ike na ahụike & nchekwa nke onye ọbịa. Na atụmanya nke nloghachi ụgbọ mmiri, ihe ndị otu nke Grand Bahama Island Tourism Board nyere onyinye maka ndị ọbịa.
Maazị Marco Gobbi, onye isi njikwa Viva Wyndham Fortuna Beach Resort kwuru, "Anyị nwere obi ụtọ maka nlọghachi onye mmekọ a dị mkpa maka anyị. Anyị ahụla mmụba nke ngwongwo ụbọchị-ngafe, ọnụnọ anyị mụbakwara,-ihe dịka 10% n'ihi mmemme a, 'Irughari na Nọrọ.' Nke a bụ nnukwu enyemaka nye azụmaahịa anyị nke na -agbasi mbọ ike ịnwe ebe obibi ezi uche dị na ya. Ọ dị ka (ume) ikuku dị ọhụrụ na -abata! ” Gobbi gara n'ihu kwuo na, "Anyị nwere olile anya na Grand Classica ga-alaghachi n'oge adịghị anya na ọkwa azụmaahịa previdic, na-enye anyị ohere iru ọkwa ụfọdụ, nke ga-enyere anyị aka ịdị na-emeghe n'oge obere oge na-abịanụ (Septemba ruo Disemba). ”
Na aka iji meziwanye ahụmịhe nnabata nnabata maka ndị ọbịa, Grand Bahama Island Tourism Board na Fragrance nke Bahamas - Ụlọ ọrụ na -esi ísì ụtọ rụpụta ihe nhicha aka nkeonwe maka ndị ọbịa bịara. Ihe nchacha nke antiseptik nwere mmanya 75%, na -asachapụ akpụkpọ ahụ nke ọma wee gbuo 99.9% nke nje. Ndị na -ehicha ihe nhicha bụ 20ml / 0.68 fl. oz na -efesa mmiri, na -esi ísì ụtọ ebe okpomọkụ na ụdị kredit kredit pụrụ iche, nke emere ka ọ dabara n'akpa azụ gị.
A na -agba ndị njem nwere ike ịga na webụsaịtị Cruise Line maka usoro ụgbọ mmiri na ide akwụkwọ njem ha na agwaetiti Grand Bahama.
https://www.bahamasparadisecruise.com/sailing-procedures.php Onyinye na nkwalite dị iche iche dị iche iche dịkwa ugbu a. Maka ozi ma ọ bụ ka ịdee njem ụgbọ mmiri, gaa www.BahamasParadiseCruise.com/. Soro Bahamas Paradise Cruise Line na Facebook na Facebook.com/BPCruiseLine, Instagram @BahamasParadiseCruiseLine, na Twitter @BPCruiseLine.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara njem gaa agwaetiti Grand Bahama, gaa www.grandbahamavacations.com .
Banyere Grand Bahama Island Tourism Board
The Grand Bahama Island Tourism Board (GBITB) bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa na nkwalite nkeonwe Akwa Bahama Island. Enyere GBITB iwu ka ọ kwado mmepe akụ na ụba maka ndị nwere njem na agwaetiti Grand Bahama.
Ihe ndị a gụnyere mmepe na igbu nke ahịa na nkwado dị iche iche ezubere iji bulie ma nwekwuo mmata na agwaetiti Grand Bahama na profaịlụ na ahịa. Ndị òtù Board gụnyere ọtụtụ azụmahịa metụtara njem gụnyere mpaghara ụlọ, ụlọ nri, Ogwe, ebe nkiri, ndị na-eweta njem, ndị omenkà na ndị na-ere ahịa.